Shiinaha 5 1 1 warshad mashiinka saxaafadda kuleylka kuleylka ah iyo soosaarayaasha | Taile
5 kiiba 1 mashiinka saxaafadda kuleylka ee combo
5-ta 1 mashiinka saxaafadda kuleylka waxaa loo isticmaali karaa funaanado, koofiyado, taarikada dhoobada ah, marmarka dhoobada, muraayadaha, xeebta, xujooyinka jigsaw, xarafka, misc kale dharka & qalabka iwm, rooga, xeebta, xujooyinka jigsaw, xarafka, misc kale. dharka & qalabka iwm Waxay ku wareejin kartaa sawirro midabyo leh iyo jilayaal sublimating iyo khad daabacan oo kala diri kara dhoobada, muraayadaha, iyo dharka sida cudbiga, flax, fiber kiimikada, nylon, iwm. sidoo kale waxay dejin karaan waqtiga iyo heerkulka saxda ah.
1.Swinging Design - oo leh shaqeyn isdaba-joog ah, wareegga darajada 360 ee gacanta oo u dhaqaajisa walxaha kuleylka si nabadgelyo leh, buro cadaadis-dheellitiran oo buuxa oo ka dhigaysa daabacaadda mid deggan, waxay yareysaa fursadaha shilalka lama filaanka ah.
2. Tayo lagu kalsoonaan karo - oo leh 12 "" x 15 "" dahaar weyn oo kuleyl ah, muraayadaha kululeeyaha qayb: 2.3 "" - 3.5 "" dhexroor (11 oz); 8 inji saxanka qayb kuleyliyaha: 5 "" dhexroor max, 10 inji saxan saxanka qayb: 6 "" dhexroor max, koofiyadaha qaybta kululaynta: 6 "" x 3 "" (qalooca)
3.Pressure Adjustable - saxaafad kulul oo leh xirxiro buuxa oo cadaadis ah, oo lagu hagaajin karo iyadoo loo eegayo dhumucda maaddada. Barxadda hoose ee rogrogmi kara waa mid la furi karo oo si fudud loogu beddeli karo asal kale iyadoo la adeegsanayo uun bareeyaha Phillips. Suufka silikoonka iyo suufka labadaba waa la dhaqaajin karaa.
4.Precise xakamaynta dhijitaalka ah - xakamaysada dhijitaalka ah ee dhijitaalka ah, dusha sare ee aan ku dhegsanayn, oo leh saldhig aluminium kala duwan oo la cusbooneysiiyay, oo loo isticmaalo koobabka, koofiyadaha iyo walxaha barkinta; ku qalabaysan saacad dijitaal ah oo sax ah iyo xakamaynta heerkulka, waxaad ku hagaajin kartaa mashiinka sida ay u kala duwan yihiin Qalabka Deji waqtiga la doonayo iyo heerkulka. Markii la gaaro waqtiga go'an iyo heerkulka, alaarmiga la maqli karo ayaa dhawaaqi doona walxaha ayaa joojin doona kuleylka
5.Mashiinnada kuleylka kuleylka ee leh cadaadis buuxa-wareejin buro, waa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo dhumucda maaddada. Barxad hoose oo furi kara, Si fudud ugu beddel canaasiir kale (Kaliya waxaad ubaahantahay Darawalka Phillips Screw Driver). Suufka silikoonka laga saari karo iyo suufka suufka. Fiyuus lagu dhex dhisay si ammaan ah loo isticmaalo
6.Wide Range of Uses - saxafada kuleylka isku dhafan ayaa ugu haboon warshadaha, xirfadleyda, istuudiyaha yar iyo isticmaalka shaqsiga. Saxaafadda kuleylka ee 5-in-1 waxaa loo isticmaali karaa funaanadaha, koofiyadaha, taarikada dhoobada ah, marmarka, koobabka, koofiyadaha, xujooyinka loo yaqaan 'jigsaw puzzles', waraaqaha, iyo waxyaabo kale oo kala duwan. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan dharka iyo alaabada, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Dammaanadda qanacsanaanta.Haddii sabab kasta oo aadan ku qanacsaneyn, fadlan nala soo socodsii oo adeegga macaamiishayadu waxay ku dadaali doonaan inay ku caawiyaan.
8 Fiiro gaar ah: Haddii saxanka kuleyliyaha uusan fidsaneyn, fadlan marka hore hubi in mashiinka la dhigay goob shaqo oo fidsan, oo hubi in saxanka kuleyliyaha uusan gariirin adoo hagaajinaya barta cadaadiska si loo hubiyo in cadaadis ku filan la saaro.
Magaca alaabta ： 5 1 1 Combo Heat Transfer Mashiinka Saxaafadda
Midabka ： Madow
Xakamaynta Waqtiga ： 0 - 999 ilbidhiqsi
Danab: 110V / 220V
Heerkulka Heerkulka (℉): 32 - 482 darajo ℉
T-shaati cabbirka saxanka ： 12 "x 15"
Koofiyad / Koofiyad Saxaafadeed ： 6 "x 3" (qalooca)
Mug Press ： 3 "-3.5" dhexroor (11oz)
Saxaafadda Saxanka ： 5 "dhexdhexaad dhexroor iyo 6" dhexroor max
Xiga: 8 kiiba 1 mashiinka saxaafadda kuleylka kuleylka ah
5 Gudaha 1 Kuleyl Saxaafadeed
5 1 Mashiinka Saxaafadda ee Heat
6 Gudaha 1 Kuleyl Saxaafadeed
6 1 Mashiinka Saxaafadda Heat
8 Gudaha 1 Kuleyl Saxaafadeed
8 1 Mashiinka Saxaafadda Heat